अब पनि सेयर कारोबारी भन्न हिचकिचाउने ? कहिले हुन्छ सेयर बजारमा व्यावसायकिता ?
काठमाडौं : पुँजी बजार अब अर्थतन्त्रको एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।
सरकारका लागि राजस्व, कम्पनीहरूको लागि पुँजी संकलनको माध्यम अनि धेरैका लागि रोजगारीको माध्यम बनेको छ, यो बजार । केही वर्षअघिसम्म पनि निकै सानो आकारको हाम्रो पुँजी बजार अहिले निकै बृहत्तर र फराकिलो हुँदै गएको छ । तर अझै पनि सेयर कारोवारी र लगानीकर्ताले भने व्यावसायिक मान्यता र सामाजिक स्वीकार्यता पाउन सकेका छैनन् ।
स्वीकार्यताको अभावमा धेरैले सेयर लगानी र कारोवारलाई वैकल्पिक आयको रूपमा मात्र लिने गरेका छन् । करोडौं लगानी वा कारोबार गर्ने व्यक्तिले पनि सेयरबाट हुने आयलाई जीवनयापन या औपचारिक आयको रुपमा देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
यही कारणले सर्वसाधारणले अर्को सानो व्यवसायलाई आफ्नो पेसाको रुपमा देखाएर त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी लगानी भएको सेयर व्यापारलाई चाहिँ वैकल्पिक वा एक हिसाबले भूमिगत पेसाको रुपमा मात्र लिने गरेका छन् ।
सेयर कारोबारीहरूले अन्य वस्तु तथा सेवा व्यापारमा जस्तै सेयर खरिदबिक्री गरेका छन् । तर व्यवहारिकरूपमा हेर्ने हो भने न त उनीहरूलाई सरकारले वा समाजले नै लगानीकर्ताको हिसाबले पूर्णरूपमा स्विकार गर्न सकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कारोबारीलाई समेत सेयर कर्जा प्रवाह गर्न चाहन्छन्, तर सेयरबाट आम्दानी गर्छ भनेर चाहिँ हत्तपत्त स्वीकारिहाल्दैनन् । यही भएर होला सेयर कर्जामा आयस्रोत चाहिँ अन्य आम्दानीबाट खोजिन्छ ।
जतिसुकै लगानी गरे पनि वा सेयर व्यापारबाट आम्दानी गरे पनि उसलाई न त व्यापारी मानिन्छ, न त स्वरोजगार व्यक्ति । सरकारले सेयर कारोवारमा कर असुल्छ तर उसको आम्दानीलाई व्यावसायिक आम्दानीको रूपमा मान्यता दिँदैन ।
समाजले पनि सयर बजारमा लगानी गरी मुनाफा कमाएको मन पराउँछ तर सेयर कारोबारी भएर जीवनयापन गरेको अहिलेसम्म त्यति मन पराएजस्तो बुझिंदैन । तसर्थ, यसलाई सम्मानित पेशा र व्यवसायको रूपमा स्थापित गराउनु आजको ठूलो चुनौति रहेको छ ।
जबसम्म यसलाई स्थापित गर्न सकिन्न तबसम्म समग्र सेयर बजारको दीगो विकास हुन कठिन हुन सक्छ । सेयर बजारलाइ सर्वस्वीकार्य पेशाको रूपमा स्थापित गराउन निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ ।
१) लगानीकर्ता र सेयर कारोबारीले निर्धक्क भएर आफ्नो जीवनयापनको माध्यम सेयर कारोवार अनि यसबाट हुने आम्दानी हो भनेर बताउने ।
२) आफ्नो परिचय दिँदा सेयर कारोवारी वा लगानीकर्ताको रूपमा दिने । जसरी अरूले म पश्मिना व्यापारी, गलैंचा व्यापारी भन्छ त्यस्तै हामीले पनि लगानीकर्ता र सेयर कारोवारी भन्ने ।
३) सरकारले सेयर कारोवारलाई आयमूलक व्यवसायको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न सेयर व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आय प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसरी उद्योग, बाणिज्य, सेवा, पर्यटन उद्योग र व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरण गरिन्छ,
त्यसैगरी सेयर कारोवार र लगानीका लागि समेत व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गर्ने । यसको लागि धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेलाई व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्ने निकायका रुपमा तोक्न सकिन्छ । व्यावसायिक मान्यता पाएमा सहज व्यावसायिक ऋणमा पहुँच हुनेछ ।
४) सेयर कारोवारमा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने, लाग्ने भए करको दर, कर गणनाविधि, आयव्यय लेखांकन, आयप्रमाणीकरण विधि सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
५) नेप्से वा धितोपत्र बोर्डले वार्षिक आय प्रमाणित गरी आयलाई मान्यता दिने । नेप्सेले अहिले लिने पुँजीगत लाभकरको आधारमा सहजै आयलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ, तर नेप्सेले कर दाखिला भएको पत्रमा लगानीकर्ताको आय उल्लेख नगरी केवल कुल संकलित कर मात्र उल्लेख गर्छ जसले गर्दा व्यक्तिले आय प्रमाणित गर्न कठिन भइरहेको छ ।
६) संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न हाल विद्यमान फरक पुँजीगत लाभकरलाई व्यक्तिसरह समान बनाएर सेयर बजारमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने ।
लेखक लगानीकर्ता हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।